Ahoana ny famonjana ny iOS 8 avy amin'ny Mac miaraka amin'ny PP | Vaovao IPhone
Azonao atao izao ny jailbreak ny iOS 8.1.2 avy amin'ny Mac anao, hazavainay ny fomba
Nacho | | Jailbreak, Fampianarana sy torolàlana
Misy fitaovana iray izao izay mamela anao hanao ilay jailbreak untethered ho any iOS 8.1.2 avy amin'ny Mac. PP Jailbreak, araka ny iantsoana ity fampiharana ity, dia tsy novolavolain'i TaiG na dia mampiasa ny fitrandrahana azy mba jailbreak ny kinova iOS 8 rehetra izay navoaka hatramin'izao.
Ny asan'ny Famonjana PP Tsotra be izy io fa ny manazava ny fisalasalana rehetra, eto ambany a torolàlana izay hanazava ny fomba fampiasana an'io fampiasana io amin'ny Mac-nao.
1 Fitaovana mifanentana:
2 Inona no ilaintsika hampiasa ny Jailbreak PP?
3 Fomba manaraka hanarahana mampiasa PP Jailbreak amin'ny Mac:
Ny jailbreak izay ampiharin'ny PP Jailbreak tsy mivady ary mifanaraka amin'ny lisitry ny iPhones sy iPad manaraka, izay nametraka ny kinova iOS 8 izay navotsotra hatramin'izao:
Inona no ilaintsika hampiasa ny Jailbreak PP?
Mac misy OS X 10.7 na avo kokoa napetraka.
Aza adino ny manao iray nomaniny ho solon'izay mampiasa iTunes na iCloud.
Atsaharo ny hidin-kaody ny fitaovana iOS sy ny toerana misy ny Find my iPhone, dia safidy mety hiteraka olana rehefa mampiditra ny jailbreak. Ny hidin-kaody dia azo esorina ao amin'ny Fikirana> Touch ID sy kaody raha tsy mandeha kosa ny Find my iPhone ao amin'ny Settings> iCloud.
Fomba manaraka hanarahana mampiasa PP Jailbreak amin'ny Mac:
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ampidino ny fampiharana PP Jailbreak ho an'ny OS X. Rehefa manana ilay fitaovana ianao dia ampandehano dia hahita ianao bokotra iray eo afovoany ny interface tsara.
Aorian'ny fanerena ny bokotra afovoany dia hampiseho amintsika efijery iray hafa ny PP Jailbreak izay tsy maintsy hanindry ny bokotra amin'ny ilany ankavanana avy amin'ny efijery.
Rehefa voatsindry ilay bokotra, hanomboka ny fizotran'ny jailbreak koa tonga izao ny dingana tokony hiandrasanao iray na roa minitra mandra-pahavitany. Rehefa vita dia hiverina ny fitaovana ary raha mandeha tsara ny zava-drehetra dia ho hitanao eo amin'ny efijery an-trano ny sary masin'i Cydia.
Vonona, efa manana jailbreak untethered amin'ny iPhone na iPad amin'ny iOS 8. Tsarovy izany raha mampiasa Windows ianao dia mila mampiasa TaiG.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Azonao atao izao ny jailbreak ny iOS 8.1.2 avy amin'ny Mac anao, hazavainay ny fomba
Ignasi serra dia hoy izy:
Mila mampihetsika ny maody fiaramanidina ianao, satria raha tsy mihetsika ny Jailbreak dia tsy mahomby.
Mamaly an'i Ignasi Serra
Franklin Salinas dia hoy izy:
Tena mandeha tsara izy io
Valiny tamin'i Franklin Salinas
Djinn dia hoy izy:
Ao amin'ny efijery an-trano PP dia tsy maintsy nesoriko ny boaty eo amin'ny farany ambany ankavia izay navadika ho toerana misy anao. Raha tsy vitako izany dia mbola tsy nahazo ny fonja iasanako. Rehefa vita ny fanaraha-maso dia mandeha tsara.
Valiny amin'i Djinn
Nandeha tsara tamiko tamin'ny lafiny roa (miaraka amin'ny vakizoro mavitrika ary tsy misy azy) ny maha samy hafa azy dia raha tsy manala azy ianao dia apetrakao ny rindranasa AppStore sinoa hampidinana fampiharana
AJB dia hoy izy:
Nahazo hafatra diso izay tsy azoko, tsy mandeha izy.
Valiny amin'i AJB
Mahazo lesoka aho amin'ny fizotran'ny 1/2 manana iphone 6 plus aho .. ampio aho azafady .. tsy azo adika akory izy io handikana ilay alika amin'ny google. jerena
Ivan (@ivalashnikov) dia hoy izy:
Namaha izany aho tamin'ny alàlan'ny fampandehanana ny TouchID sy iCloud ary avy eo namerina ilay iPhone.
Valiny tamin'i Ivan (@ivalashnikov)
Tsy mandeha amin'ny fomba rehetra anaovany fahadisoana ...
Inona no hitranga raha manavao ny iPhone aho mandritra ny jailbreak
Manome. dia hoy izy:
Izy io dia niasa ho ahy tamin'ny fanesorana ny kaontiko icloud sy id touch ary nanombohana azy ...
Mamaly an'i Dar.
Ezk dia hoy izy:
Rehefa manokatra ny PP mankany amin'ny jailbreak aho dia hita mihidy ny bokotra lehibe ary tsy avelako hanao izany. Ahoana no ahafahako mamaha izany?
Mamaly an'i Eze
josi dia hoy izy:
mbola manan-kery ve ity jailbreak ity?
Mamaly an'i josi
Ahoana ny fomba hifehezana ny PC na Mac anao amin'ny iOS amin'ny Google Remote Desktop